Wadamada mamnuuca ah iyo hawlaha BancaNEO
Xisaab Gaar ah
Kaabayaasha dhaqaalaha ee Shiinaha
Xudduudda Liiska Madoow
Khidmadaha Caalamiga ah
Bangiyada Adeeg ahaan (BaaS)
Kaararka Barnaamijka Calaamadda Cad
Software ahaan adeeg (SaaS)
API Adeeg ahaan (AaaS)
Bangiyada tooska ah
Wadamada iyo hawlaha la mamnuucay
Maxkamadaha liiska Madow:
Territory British Indian Ocean
Jasiiradda Cocos (Keeling)
Kongo (Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee)
Faransiis Southern Dhulalka
Heard & Mcdonalds Islands
Waqooyiga Kuuriya (Jamhuuriyadda)
Dhulka Falastiiniyiinta, degganaayeen
St Pierre iyo Miquelon
Svalbard iyo Jan Mayen
Us Jasiiradaha Yar ee Ka Baxsan
Anaga Virgin Islands
Wallis iyo Futuna
Hawlaha la mamnuucay
1. Soo saarista ama ka ganacsiga badeecad kasta ama hawl kasta oo loo arko sharci-darro marka loo eego shuruucda ama xeerarka waddanka martida loo yahay ama heshiisyada caalamiga ah, oo ay ku jiraan iyada oo aan xaddidnayn shuruudaha waddanka martida loo yahay ee la xidhiidha deegaanka, caafimaadka iyo badbaadada iyo dhinacyada shaqada;
2. Soo saarista ama ka ganacsiga hubka iyo rasaasta;
3. Soo saarista, ganacsiga, kaydinta, ama qaadista xaddi la taaban karo ee kiimikooyinka halista ah, ama qiyaasta ganacsiga ee isticmaalka kiimikooyinka halista ah;
4. Soo saarista ama ka ganacsiga tubaakada;
5. Ka ganacsiga duur-joogta ama badeecooyinka duur-joogta ee lagu maamulo CITES;
6. Soo saarista ama ka ganacsiga walxaha shucaaca;
7. Hawlgallada jaridda ganacsiga ama iibsashada qalabka wax lagu gooyo ee loo isticmaalo kaynta qoyan ee kulaalayaasha ah;
8. Soo saarista ama ka-ganacsiga dawooyinka ee ku xidhan waji-bax ama mamnuucid caalami ah;
9. Soo saarista ama ka-ganacsiga sunta cayayaanka/daawaynta dhirta ee ku xidhan wejiga caalamiga ah ama mamnuucida;
10. Kalluumeysiga saafiga ah ee deegaanka badda adoo isticmaalaya shabaqyo ka badan 2.5km. dhererka;
11. Wax-soo-saar ama waxqabadyo ku lug leh qaababka waxyeellada leh ama ka faa'iidaysiga ee xoog-shaqsiyeed/shaqo carruur waxyeello leh;
12. Soo saarista ama ka-ganacsiga walxaha xaalufinaya ozone ee ku xiran waji-gabax caalami ah;
13. Wax-soo-saarka ama ka-ganacsiga alwaax ama wax-soo-saarka kaymaha kale ee kaymaha aan la maamulin;
14. Sariflayaasha lacagaha;
15. Ganacsi kasta oo la xidhiidha sawir-qaadka ama dhilleysiga;
16. Dhagaxyada, macdanta, ama habaynta biraha ama dhuxusha;
17. Bixinta ama helitaanka hadiyado loo fasiran karo inay ku talo jiraan inay saamayn ku yeeshaan go'aamada ganacsiga;
18. Ku xadgudubka sirta ah ama walxaha, macluumaadka aan dawliga ahayn;
19. Ka-ganacsiga dhogorta Xoolaha, Lafaha iyo Maroodiga;
20. Ganacsi dheeman ah oo aan lahayn Shahaadada Kimberley;
21. Waxyaalo anshax-darro ah oo ay ku jiraan sawir-qaadka carruurta;
22. Walxaha dhaqameed sida farshaxanada, taallo, waxyaalaha qadiimiga ah, alaabta aruuriyayaal, qaybo qadiimiga ah gaar ahaan Jamhuuriyadda Ciraaq;
23. Ka Ganacsiga Rashka, Walxaha Qarxa iyo Hubka Nukliyeerka;
24. Ka ganacsiga maandooriyaha oo ay ku jiraan kiimikooyinka loo isticmaalo in lagu sameeyo daroogo ama daroogo la sameeyay;
25. Ka-ganacsiga Alaabooyinka/Ikhtiyaarada/Hedging;
27. Khamaarka Khamaarka/Qamaarka/Khamaarka/Tartanka Fardaha/Bingo/Sports-Qamaarka Aan Shatiga Lahayn;
28. Khamaarka khadka tooska ah / Khamaarka khadka tooska ah / Khamaarka khadka tooska ah / Khamaarka khadka tooska ah / Abaalmarinta Abaalmarinta / Kaararka Hadiyadaha / Nooc kasta oo Bakhtiyaa-nasiibka ah / Kaararka xoqitaanka;
29. saamiyada iyo curaarta;
30. Jewel, Gem, Ganacsato bir ah oo qaali ah;
31. Qaab-dhismeedka Barkad Lacageed;
32. Ikhtiyaarada Sarifka calamiga ah/Lansiga ah ee aan shatiga lahayn.
Wadamadan iyo hawlaha la mamnuucay waa qayb muhiim ah oo ka mid ah BancaNEO Siyaasadda Ka Hortagga Lacag-dhaqidda iyo Maalgelinta Argagaxisada.
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?
Hadafkayaga Neo waa inaan ballaarino maamulka lacagtaada iyo fursadaha wax kala iibsiga
BancaNEO waa summad ka diiwaan gashan MY NEO GROUP TRUST
Via Giovanni Boccaccio N°29 - 20123, Milano - Italy
Lambarka VAT: 12302220962
BancaNEO iyada oo Satchel ay xubin muhiim ah ka tahay MasterCard Europe bixinta kaararka.
BancaNEO iyada oo Satchel ay ku hoos shaqayso Satchelpay UAB (reg Nr. 304628112) kaas oo shati ka haysta Waaxda Adeegga Kormeerka ee Bangiga Dhexe ee Lithuania isla markaana la siiyay shatiga hay'adda lacagta elektiroonigga ah Nr. 28, oo leh nidaamka lacag bixinta nambarka kaqeybgalaha Nr. 30600, oo ganacsi ku hoos qabta sharciyada Jamhuuriyadda Lithuania.
BancaNEO - Waxaa ku shaqeeya KOOXDA NEO-gayga
2022 XNUMX - Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay.